War Saxafadeed: Ururuka Qurbajoogta Puntland – Taageero Shirka Wadatashiga Dastuurka Soomaaliya. – Radio Daljir
Ref: PDF/011132 Date: December. 19th , 2011
Waxaa Gollaha Qurbajoogta Puntland (PDF) uu soo dhaweynayaa kulanka wadatashiga Dastuurka Soomaaliya ee lagu wado inuu ka furmo Magaaladda Garoowe, Puntland, Somalia.
Waxaan kale oo aan ku faraxsanahay safarka uu Madaxweyne Shariif Axmed ku tagay Garoowe markii labaad si uu halkaas uga qaybgalo kulanka qiimaha badan ugu fadhiya Soomaalida ayidsan in la helo wadashaqayn iyo kalsooni dhab ah oo dhex marta dawlad Goboleedyada dalka (stakeholders) iyo Dawlada TFG.
Waxaa amaan mudan maamulka iyo shacabka Puntland oo si wadaniyad iyo walaalnimo ku dheehan tahay wufuuda ka soo qaybgalaysa kulankaasi ugu soo dhawayeen magaalada Garoowe.
Waxaa kale ee uu ururka PDF ugu yeerayaa xubnaha baarlamaanka TFG inay ka waan toobaan isqabqabsiga iyo khilaafaadka joogtada ah kaas oo khalkhal ku abuuraya habsocodka maamulka dawlada, ka hor imanaya heshiiskii Kampala, xagal daacinayana hiigsashada iyo hindisaha ?Roadmap? ka iyo in laga baxo kumeelgaarnimada loona gudbo dowlad dhamaystiran oo leh Dastuur ay kuna howlgasho.
Waxaan aad uga xunahay dagaalada ka soo cusboonaaday gobolada dhexe gaar ahaan Caabudwaaq iyo Dhuusamareeb, Waxaan shacabka iyo masuuliyiinta deegaamadaasi ugu yeeraynaa inay ka waantoobaan dhiiga qiimadarada lagu daadinayo, khilaafaadkoodana ku dhameeyaan wada hadal.
Waxaan guud ahaan Shacabka Puntland, gaar ahaana reer Taleex, uga tacsiyaynaynaa dilalkii loo gaystay sadexda marxuun ee lagu dilay Taleex, anagoo ugu yeerayna Cuqaasha Gobolka Sool, gaar ahaan reer Taleex, inay ka hortagaan dhiig danbe oo daata, wada hadal iyo wada xaajoodna lagu soo afjaro dhacdadan naxdinta leh, lana soo qabto gacan ku dhiiglayaasha falalkaas xun gaystay.
Waxaan Soomaali meelay joogtaba ugu yeeraynaa Nabad, Wada-noolaansho iyo in laga wada shaqeeyo sidii lagu gaari lahaa in la helo Dawlad Soomaaliyeed oo ku salaysan cadaalad iyo sinaan, taas oo dhawrta xuquuqda muwaadiniinta, kuna salaysan sharci iyo kala danbayn.
Guddiga Saxaafada iyo Xiriirka Bulshada,